အိမ်ဖြူတော် အထက်တန်း အရာရှိကြီး ဂျနီဖာအေရန်ဂျီယို ရာထူးမှနုတ်ထွက် - Yangon Media Group
အိမ်ဖြူတော် အထက်တန်း အရာရှိကြီး ဂျနီဖာအေရန်ဂျီယို ရာထူးမှနုတ်ထွက်
အမေရိကန်သမ္မတ အိမ်ဖြူ တော်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီမှ အထက်တန်းအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သူ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဂျနီဖာအေ ရန်ဂျီယိုသည် သမ္မတထရန့်၏ ရွှေ့ ပြောင်းခိုလှုံသူများအရေးကိစ္စတွင် သဘောထားကွဲလွဲခဲ့၍ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်က ရာထူးမှနုတ်ထွက်သွားခဲ့သည်ဟု အမေရိကန်အရာရှိနှစ်ဦးက ဇူလိုင် ၁၄ ရက်က ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်သည်။
၎င်းသည် ယင်း ကောင်စီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းနှင့် မဟာမိတ်များဌာန၏ အကြီးအမှူးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အိမ်ဖြူတော် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် စတီဖင်မေလာနှင့် တရားရေးဌာနအကြီးတန်းအရာရှိ ဂျီနီဟာမီလ်တန်တို့နှင့် မူဝါဒရေးရာပိုင်းတွင် အချင်းများခဲ့ကြသည်ဟု အမည်မဖော်သူအရာရှိတစ်ဦးက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဂျနီဖာ၏နုတ်ထွက်လွှာနှင့် ပတ်သက်၍ အိမ်ဖြူတော်က သ တင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုမရှိခဲ့သေး ချေ။ သူမသည် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်၏ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် သမ္မတရွေး ကောက်ပွဲလှုံ့ဆော်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ယခုရာထူးတွင်လည်း သူမအထက်မှ H.R. McMaster ပြီးလျှင် ဒုတိယအရေးပါအရာရောက်သူ အရာ ရှိတစ်ဦးလည်းဖြစ်ကာ ရှစ်နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အရာရှိတစ်ဦးက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
သက်ကြီး စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်သား အမြန်ဆုံးစေလွှတ်ပေးရန် သတ်မှတ်ချက်အချို့ ဖြေလျှော့၍ ဂျပန်အ?
အနာကြီးရောဂါသည်များနှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောအသိ မဖြစ်ပေါ်ရန်နှင့် ခွဲခြားမဆက်ဆံရန် နိုင်?
အမေရိကန် အီလီနွိုင်းတွင် ဓာတုစက်ရုံပေါက်ကွဲ၊ တစ်ဦး သေဆုံး၊ နှစ်ဦး ပျောက်ဆုံးနေ
ပညာရေး အသုံးစရိတ် တိုးမြှင့်ရေး တိုက်ပွဲကော်မတီမှ နှစ်ပတ်အတွင်း ပညာရေးအသုံးစရိတ် တိုးမြှင